Omenala nke Andorra
Onye ọ bụla dwarf steeti nwere ya akụkọ ihe mere eme pụrụ iche, nke na-ahapụ ihe a na-apụghị ịkọwa akara na ọdịbendị na ọdịnala nke mba, na Andorra na nke a abụghị naanị. Ọchịchị nke karịrị otu puku afọ nwere ike ịzọpụta ọ bụghị naanị ókèala ya na nnwere onwe ya, kamakwa ụfọdụ ihe gbasara ya na ọdịnala na ọdịnala na-atọ ụtọ.
Ụtụ na ụtụ
Ihe mbụ nke na-egbu Andorra bụ ụdị ọchịchị ya dị iche: ọchịchị ndị omeiwu. Ọtụtụ narị afọ gara aga, na-ezere esemokwu na ihe ize ndụ nke ịla n'iyi, ndị Andorrans bịanyere aka na nkwekọrịta na onye na-achị France na onye Spanish Spanish bụ ndị isi na-achị achị. N'aka nke ọzọ, nchebe nke Andorra dabara n'ubu ndị agbata obi siri ike, N'aka nke ọzọ, Andorra na-akwụ ndị na-achịkọ ụtụ ụtụ: French Francesa 960 francs, na bishọp Spanish, na mgbakwunye na 460 pesetas, nwekwara ihe oriri zuru ezu: mkpụrụ iri abụọ na abụọ, akụkụ na capons, yana 6 hams. N'afọ 1993, a kwụsịrị ụgwọ ego site na nchịkọta akọrọ, mana ụtụ nke ụtụ isi n'oge ahụ ka dị. Ebee ka ị ga-aga izute na narị afọ a?
Site n'ụzọ, ụgwọ nile na ụtụ isi na Andorra ejirila ya nye ọtụtụ puku afọ na akpa akpaghị aka - yana ochie. N'ụzọ na-akpali mmasị, enwere ụbọchị pụrụ iche na Isi Obodo, bụ nke a ga-akwụ ụgwọ ọ bụla nke mmadụ (ụtụ isi na ụgwọ). Ụbọchị ikpeazụ nke ugwo maka obodo (obodo) bụ onye na-akpọsa ma kwusie ike na "akwụkwọ ndekọ ego bụ ndị a ma ama!". Nke a pụtara na ego a na-akwụ ụgwọ agaghị anabata ya n'enweghị ezigbo mma, nke a na-eme kwa ụbọchị.
Ụdị omenala na Andorra
A kwenyere na ndị bi na Andorra dị ezigbo mma na ndị okpukpe. Otu obere ala nwere oke ego anaghị akwado iwu oke ohia. Na akụkọ ihe mere eme, nwa amaala ọ bụla na akọnuche ya ga-egbutu naanị ihe ọ bụla ọ chọrọ, ya adịkwaghị osisi. Ndị Andorrists kwenyere na ntaramahụhụ nke Onyenwe anyị ga-emetụta ha.
N'aka nke ọzọ, na Andorra, ịkwa emo abụghị ihe mpụ. Ihe ọzọ - iwu adịghị amachibidoro iwu, ọbụla na-agbakwa ya ume n'ụzọ ụfọdụ. Omenala naanị na-enyocha akwụkwọ, ọ dịghị onye ga-achọ ihe gị. Ya mere, ọ bụrụ na ị gbara mbọ ịghọ aghụghọ na omenala Spanish ma ọ bụ French ma wepụ ihe ngwongwo na ngwaahịa, ahụhụ na họrọ nke a n'ezie ọ dịghị onye ga-eme.
Ebe ọ bụ na ndị na-achị achị, ndị agha nke ọchịchị ahụ gbawara. Na Andorra, ndị agha na ọrụ ndị agha anaghị achọ ọrụ dị otú ahụ. Ma na nkwekọrịta nke ọ bụla, ndị na-eto eto kachasị mma na-esonyere ndị nche obodo, ọrụ ha bụ ịnakwere ndị ọbịa dị iche iche na ndị na-agba ọsọ.
Dịka otu oge ahụ na Andorra, ọdịnala nke na-eduzi asọmpi poetry nke troubadours nwere ọdịdị. Omume ọma na-eme dị ka ọtụtụ ememe ndị ọzọ: - na uwe ejiji n'oge ochie, ezigbo agha, na knights na àgwà kwekọrọ na ya. Onye obibi ọ bụla site na nwata na-aghọta abụ uri Provençal ma na-asọpụrụ ya.
Ezigbo ndị agha, ọ bụ ezie na ha dị nsọ na ndị na-arụ ọrụ ụlọ, ma ndị dị mpako ma na-ele ọbịa. Ma ọ dịghị afụ ụfụ ha na-achụpụ gị ozugbo site na mba ahụ maka mmejọ na omume siri ike nke iwu ọha na eze, n'agbanyeghị ọkwa gị na ọnọdụ gị. N'ụzọ, ụzọ amachibidoro idebe omenala Katọlik doro anya, ọnyá, agụụ mmekọahụ na ịgba akwụna na Andorra. A hụghị ụdị dị iche iche nke ndị na-eto eto.
Ụmụ amaala ndị ahụ bụ ụmụ ndị Catalan dị ala ma nọgide na-ebi na ndagwurugwu ugwu, na mgbakwunye na asụsụ Catalan, asụsụ Castilian na-adịkarị. Ndị omenala kweere na ihe dị ka otu narị mba bi na Andorra, ndị agbata obi na-eme udo na ibe ha, n'ihi ya, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na teknụzụ nke oge a na-ejikọta ọnụ na ọdịnala nke nna nna.
Ịgba ụgbọ ala na Brussels
Ebe ndị na-agba ọsọ ski nke Macedonia
Ulo nke Norway
Visa maka ndị Cyprus
Ebe nkiri San Marino
Ọdụ ụgbọ mmiri nke Saịprọs
Iceland - nlegharị nleta nleta
Ebe ndị bi na Andorra
Njem na Norway
Ụlọ ndị Slovenia
Na-ekiri ihe nyiwe na Czech Republic
Hotels na Saịprọs
Ezigbo mmasị gbasara Belgium
"Ọchịchịrị" nke Lily James kwuru
Borsch na-enweghị anụ
Sand na akụrụ - akpata na ọgwụgwọ
Kedu ka ị ga-esi lee foto gị na laptọọpụ?
Kim Kardashian bipụtara esemokwu ezinụlọ nke mbụ
Ọhazi nke ezi obi na aka aka ha
Ihe ngosi nke ihe nfe na agwaetiti Saaremaa
Ndị nwamba nwamba
Mgbọrọgwụ nke wheatgrass - ọgwụ Njirimara na contraindications
Gịnị mere nwatakịrị ji na-azụ nwa mgbe o richara nri?
Adriana Lima gwara ndị fans na ya agaghịzi enwe ihe kpatara ya
Senten ofe - uzommeputa
Otu ime ụlọ osisi
Ọhụụ na-ada ụda
Mehendi na nkwojiaka
Kedu ka esi tinye maka alimoni?
Anya ugogbe anya 2015
Nri nri maka puppies
Nri iri abuo (nke di oke nma) site na akwukwo nri
Ebube nke Sunglasses 2014
Ụbọchị nke Fireman